Nidoboka eny Tsiafahy ny lehilahy miisa roa, isan’izany ny mpiambina sy ilay tompona fiara taxi, tamin’ny fanafihana ny mpandraharahan’ny Golden Center etsy Behoririka. Nidoboka eny Antanimora ihany koa ny vehivay iray vadin’ilay jiolahy sy ny rainy. Ramatoa iray hafa koa no tra-tehaky ny polisy nahazo vola 5 Tapitrisa Ar, izay nifandray tamin’ireo jiolahy ary naiditra vonjimaika eny Antanimora raha nahazo fahafahan vonjimaika ny lehilahy iray.
Lehilahy miisa efatra sy vehivavy roa no voasambotry ny polisy, ny alatsinainy sy alarobia teo noho ny resaka halatra moto. Fantatra fa namaky garazy eny faritra Ankaditoho-Tsimbazaza, izy ireo ka lasa tamin’izany ny moto. Loharanom-baovao no namatarana fa tamin’ny tokantrano iray ao Ankadimbahoaka no nanafenan’izy ireo ny moto, izao tratra izao.
Trano iray no may, omaly hariva manodidina ny tamin’ny efatra ora teny Andrefan’Ambohijanahary.Misy efitrano miisa 12 io trano “stockage”-na fripy sy fatoriana io. Maro ny entana may ary tsy niitatra tamin’ny manodidina izany. tsy nisy ny aina nafoy sy naratra.